काठमाडौँ - रंगमंचका थुप्रै कलाकारहरुको अभिनय रहेको वेब सिरिज 'ईओजी (Errors of God)' को फर्स्ट लुक पोस्टर सार्बजनिक गरिएको छ । कलासी प्रोडक्सनको निर्माणमा प्रकु पाण्डेले निर्देशन गरेको यस सिरिजमा आफ्नो सबै शक्ति गुमाएर पृथ्वीलोकमा साधारण मानिसको रुपमा आएका भगवानहरुको कथालाई मनोरन्जनात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । संगीत सापकोटाको लेखन रहेको यस सिरिजलाई सगुन पोख्रेलले निर्माण गरेकी हुन् । बिकाश जोशी, राज न्यौपाने, घनश्याम जोशी, ममता लामिछाने, सुचित्रा उप्रेती, युनिसा ढुंगाना 'सरिता' को साथमा भोलाराज सापकोटा, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, प्रतिक दुलाल, अस्मिता खनाल लगायत रंगमंचका ...
काठमाडौँ - बिन्ध्यवासिनी म्यूजिक प्रालिले २०७७ का लागि अवार्ड पाउने बिजेताहरुको घोषणा गरेको छ। काठमाडौस्थित होटल याक एण्ड यतिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बिजेताहरुलाई सम्मान तथा अवार्ड वितरण गरिएको हो। यो वर्षको विन्ध्यवासिनी लाईफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड गायक श्री योगेश वैद्यले प्राप्त गरे। जस अनुसार उनले सम्मान संगै नगद १ लाख हात पारे। त्यस्तै, विन्ध्यवासिनी संगीत साधना सम्मान गायिका श्री कुन्ती मोत्तानले हात पारिन। उनले सम्मान संगै ५० हजार हात पारिन। गायिका श्री माण्डवी त्रिपाठीले विन्ध्यवासिनी संगीत रत्न सम्मान जित्दा विन्ध्यवासिनी संगीत कला पत्रकारिता सम्मान पत्रकार श्री ...
काठमाडाैं - कोरोना महामारीको चपेटामा परेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ ले प्रदर्शन मिति तोकेको छ। झरना थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्मले २०७८ साल भदौ १८ गतेका लागि प्रदर्शन मिति तोकेको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निर्देशक तथा नायिका झरनाले फिल्म प्रदर्शन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेकी हुन्। फिल्ममा नायक अनमोल केसी र झरनाकै छोरी सुहाना थापाको मुख्य भूमिका छ। फिल्ममा सलोन बस्नेतलाई पनि देख्न सकिन्छ। सुनिलकुमार थापाको प्रोडक्सन ब्यानरमा बन्न लागेको फिल्ममा झरना थापा र छेतेन गुरुङको कथा छ। ...
बिगत ७ बर्षदेखी निरन्तर रुपमा आयोजना हुँदै आएको ‘छायाँछबि तीज म्युजिक अवार्ड’को सातौं संस्करण र चौथो काठमाण्डौ सर्टफिल्म फेष्टिवल औपचारिक रुपमा काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । सर्टफिल्म तर्फको उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रि बिकाश घले गुरुङ द्वारा निर्देशित वृतचित्र “Mass Choreography OF Nepal” ले हात पारेको छ । नेपालमा समुह नृत्यको बिगत-बर्तमान-भबिष्य बारे केलाऊन सफल यो बृतचित्र Mass Choreography सिक्न चाहनेहरुको लागि यौटा ऊत्कृष्ट स्रोत हुने निर्देशक दाबि गर्नु हुन्छ । भबिष्यमा यसबारेको नेपाली ईतिहास बुज्न चाहनेको लागि पनि यो ऊत्कृष्ट दस्ताबेज हुने उहाको भनाई छ । निर्देशक बिकाश ...
गायिका अन्जली राईको 'एक्लै एक्लै सुदुर यात्रामा' बोलको गित युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। बुढा सुब्बा डिजिटलबाट सार्वजनिक भएको गीतलाई दरबारमार्गस्थित 'किंग्स लाउन्जबाट' गीतको टिमले केक काटेर सार्वजनिक गरेका छ। गीतको शब्द रचनाकार सिंघ बहादुर श्रेष्ठ, संगीत कल्याण थापा, एरेन्जर किशोर अर्याल, रेकर्डिस्ट भोला पौडेल, मास्टरिङ्ग प्रदिप उपाध्याय, क्यामेरा र एडिटिंग राजेन्द्र पाण्डे, मेक अप बिक्रम गौतम, लाइटिंग राजकुमार रहेका छन्। गीतको भिडियोलाई संजय पाण्डेले निर्देशन गरेका हुन् जसमा काशिस दाहाल, बिबेक शाह, बर्षा राज्य लक्ष्मी शाहले अभिनय गरेका छन्। गीतमा अन्जलिले एक्लै एक्लै सुदुर यात्रामा केहि कुरा खोजिरहेकि ...
'एसिड भिक्टिम'लाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न हाम्रो भूमिका के हो ? यस्तो बन्यो भिडियो !
डिज जोशीको स्वर, शब्द तथा संगीत संयोजनमा 'फ़िजाइं पंख' बोलको गित सार्वजनिक भएको छ। गीतको भिडियोमा गौरव पहारी, बेनिशा हमाल, जेवी डिसी, कमलमणि नेपाल, सुनिता श्रेष्ठ लगायतले अभिनय गरेका छन्। सांगीतिक कथा भनिएको उक्त म्युजिक भिडियोले एसिडले छ्यापिए पछि पिडितलाई समाजमा कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने बारे देखाउन खोजेको छ। यस्तो छ कहानी ! गौरब पहारी र बेनिशा हमाल प्रेम सम्बन्धमा हुन्छन। बेनिशा पेशाले नर्स हुन्छिन। बेनिशालाई अर्को पात्र जेवी डिसीले पनि मन पराउछन। जब डिसीले बेनिशाको अर्कै केटासंग प्रेम सम्बन्ध भएको थाहा पाउछन बदला लिन उनले बेनिशाको अनुहारमा ...
महामारी पछि सिनेमा : 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' माघ १ गते रिलिज हुने
कोभिडका कारण लामो समय सिथिल भएको नेपाली फिल्म क्षेत्र जुरमुराउने अभ्यासमा छ। यसै बिच एक्सन नायक शिव श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा बनेको फिल्म 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी'को प्रदर्शन घोषणा गरिएको छ। पुष १७ गते पोस्टर रिलिज सँगै गरिएको घोषणा अनुसार फिल्म माघ १ गते देखि देशभरका हलहरुमा प्रदर्शन हुने बताइएको छ। शिव श्रेष्ठले नेपाली फिल्ममा प्राप्त गरेको सफलताले उनलाई पाकिस्तानी फिल्म उद्योग सम्म डोर्‍यायो । पाकिस्तानमा श्रेष्ठको कलाले राम्रो उचाई लियो। यसरी नेपाली र बिदेशी समेत फिल्मलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका ब्याक्तीले अहिने नेपाली फिल्म उद्योग झन्डै कोमामा पुगेको परिस्थितिमा ...
'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' को आइटम गीतमा सुष्मा कार्कीको हट अभिनय
काठमाडौँ - दिपेश सापकोटा निर्देशित फिल्म 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' को आइटम गीत सार्बजनिक गरिएको छ । 'हलाल' बोलको गीतमा गायिका मिना निरौलाको स्वर, बि. बि. थापाको शब्द र सन्तोष रजौरेको संगीत रहेको छ । त्यस्तै गीतको भिडियोमा अभिनेत्री सुष्मा कार्कीको नृत्य देख्न सकिन्छ । अभिनेता शिव श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा बनेको यस फिल्ममा शिव श्रेष्ठ, शक्ति श्रेष्ठ, प्रियंका कार्की, कविता मानन्धर, आयुष्मान देसराज श्रेष्ठ जोशी, वर्षा राउत, संजोग कोइराला, बसुन्धरा भुषाल, आंग तेंबे शेर्पा, मिथिला शर्मा, बिष्णु चेम्जोंग, रेखा फागु, नरेन खड्का, ध्रुब ...
जनक घर्ति मगरको लेखन तथा निर्देशन रहेको वेब सिरिज 'बर्खा' को ट्रेलर सार्बजनिक गरिएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेमकथालाई हाँस्य रुपमा चित्रण गरिएको यस सिरिजमा जनक घर्तिमगर, सिर्जु केसी, केशव घर्ति मगर, लीन ओली, निखिल सेन्चुरी, सुरेश गिरि, इशारा मगर, तेलिशा थापा लगायतको अभिनय रहेको छ । नारायण दहितको छायांकन रहेको सिरिजलाई संदेश शाहले सम्पादन गरेका हुन् । सिरिजको छायांकन रोल्पाका सुलिचौर, घोडागाउँ, नुवाकोट लगायतका स्थानहरुमा गरिएको हो । जीएम मुभिज प्रोडक्सनले निर्माण गरेको सिरिजको ट्रेलर सोहि कम्पनिको आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत सार्बजनिक ...
निर्देशक दिपेस सापकोटाको दमदार कमब्याक, बिश्व र अस्मिताको स्वरमा नयाँ गीत
काठमाडौँ - युरोप र सिङ्गापुरमा फिल्म मेकिङ पढेर फर्केका निर्देशक दिपेस सापकोटा 'आकासैको छानो मुनि बासाउँ एक सहर' बोलको गीत निर्देशन गरि ओजपुर्ण 'कमब्याक' गरेक छन्। टेस्ट गरम, भन के छ बन्दोबस्त, कोरेर मेरो चित्र लगायत दर्जनौं हिट गीत दिइसकेका गायक बिश्व नेपालीलाई यो गीतमा अस्मिता परियारले स्वरमा साथ दिएकी छिन्। सम्भ्रान्त परिवारका युवा युवतीको प्रेम जिवनलाई फ्रेममा उतारेको निर्देशक सापकोटा बताउँछन्। गीतलाई उत्कृष्ट बनाउन करिब एक हप्ता लगाएर सुटिङ गरिएको सापकोटाले जानकारी दिए। नेपाली कलाकारीतामा कोभिड १९ को प्रभावसंगै ब्यवसायिक सफलता लिन गाह्रो भएको अवस्थामा ट्री इन्टरटेन्मेन्टले ...